Akụkọ - Mmiri ọrinụ fromụ si na mmiri mmiri
Mgbanwe ihu igwe na mmepe ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ na ọrụ ugbo ụwa na-eme ka nsogbu nke enweghị mmiri ọ freshụ increasinglyụ na-akawanye njọ, na ịnye mmiri dị mma na-arịwanye elu, nke mere na ụfọdụ obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri na-enwekwa ụkọ mmiri. Nsogbu mmiri bụ mkpa a na-enwetụbeghị ụdị ya maka ịmị mmiri mmiri. Ihe eji eme ka akpụkpọ ahụ dị na mmiri bụ usoro nke mmiri mmiri na-abanye n'ime akpụkpọ ahụ na-adịghị agafe agafe na nrụgide, nnu na oke mmiri na mineral na-egbochi n'akụkụ nrụgide dị elu ma wepụ ya na mmiri mmiri dị omimi, mmiri dị mma na-apụkwa. site na ala nsogbu.
Dabere na National Bureau of Statistics, ngụkọta nke mmiri ọ freshụ freshụ dị na China bụ 2830.6billion cubic mita na 2015, na-atụle ihe dịka 6% nke mmiri mmiri ụwa, na-agbago nke anọ na ụwa. Kaosiladị, mmiri mmiri ọhụụ n’onwe onye bụ sọọsọ cubic abụọ na narị abụọ, nke bụ naanị 1/35 nke nkezi ụwa, enwere ụkọ nke ezigbo mmiri ọ naturalụ .ụ. Site na osooso nke mmepe ulo oru na mmepe obodo, mmetọ mmiri a na-emetọ ihe kachasị njọ site na mmiri na-ekpofu mmiri na mmiri nsị. A na-atụ anya ịkọwa mmiri nke oke osimiri ka ọ bụrụ isi ihe maka ịgbakwunye mmiri ọ drinkingụ highụ dị elu. Ulo oru itunye mmiri nke China na eji ihe dika 2/3 nke ngụkọta. N'ihe dị ka ọnwa Disemba 2015, arụpụta mmiri ị ga-aawụ n'oké osimiri 139 ka e wuru na mba, yana ngụkọta nke 1.0265million tọn / ụbọchị. Mmiri mmiri eji eme ihe mejuputara 63.60%, ebe obibi obibi bụ 35.67%. Ihe oru ngo nke uwa nile bu mmiri obibi (60%) ka odi na mmiri ulo oru na 28%.
Ihe mgbaru ọsọ dị mkpa nke mmepe nke teknụzụ imetọ mmiri mmiri bụ iji belata ụgwọ ọrụ. N'ime ihe eji arụ ọrụ, ụgwọ ọrụ ike eletrik bụ nke kachasị oke. Mbelata oriri ike bụ ụzọ kachasị dị irè iji belata ọnụahịa imetọ oke mmiri.
Ro Well Water Ọcha Myọcha, Ro Water Myọcha akụkụ, Professional Water Myọcha System, Nhazi System Sodium Hypochlorite, Usoro Ro Desalination, Mmiri Osimiri Na-a Dụ Ngwa igwe,